🥇 ▷ Huawei waxay saadaalinaysaa daraasad cusub waxa noqon doonta isbeddelka tikniyoolajiyadda sannadka 2025 ✅
Huawei waxay saadaalinaysaa daraasad cusub waxa noqon doonta isbeddelka tikniyoolajiyadda sannadka 2025
Shiinaha Huawei ayaa dhawaan lasameeyay daabacaadii cusub ee warbixinta Himilada Warshadaha Caalamiga ah (GIV), kaas oo ujeedadiisu tahay inuu sii wado saadaalinta horumarka teknolojiyadda iyo warshadaha illaa sanadka 2025. Ku saleysan xogta tirakoobka Huawei ee gaarka ah, iyo sidoo kale kiisaska dhabta ah ee loo adeegsado kiisaska ku saabsan sida tikniyoolajiyada caqliga leh ay uxirmayaan dhammaan waaxaha, warbixinta ayaa tilmaamaysa 10 megatrends oo hadda qaabeeya dadku way nool yihiin oo shaqeeyaan.
GIV waxay sidoo kale saadaalinaysaa isbeddelka tikniyoolajiyada sannadka 2025, oo ay ku jiraan caymiska 5Ganigaabuurista Sirdoonka Artificiall korsashada robots guriga iyo qiyaasta isticmaalka kaaliyaha smart. 10ka isbeddelo iyo tusaalooyinka saadaasha guud ee GIV ee 2025 waa:
La Noolo Bots
Horumarrada sayniska maaddada, sirdoonka macmalka ah ee farsamada gacanta, iyo teknolojiyadda isgaarsiinta ayaa kicinaya ansaxinta robotics-ka guriga iyo duruufaha shaqsiyeed ee kala duwan. GIV waxay saadaalineysaa heerka qiyaasta adduunka ee 14% robots guri.
Isku xirnaanta 5G, Xaqiiqada Virtual / Xaqiiqada Agoosto, barashada mashiinka iyo teknoolojiyadda kale ee soo ifbaxaya ayaa noo oggolaan doona inaan aragno wax ka baxsan masaafada, dhalanrog, dusha sare iyo taariikhda, furitaanka aragtiyo cusub oo dadka, ganacsiga iyo dhaqanka. GIV waxay saadaalineysaa in boqolkiiba shirkadaha adeegsada Xaqiiqda dhabta ah / Xarkaha Xaqiiqda ay kordhayaan 10%.
Maaddaama aaladaha xogta lagu wado oo leh dareemayaal isku dhafan ay bilaabaan inay saadaalin karaan baahiyadeenna, macluumaad ayaa na heli doona. Cilmi baarista mustaqbalku waxay noqon doontaa mid bilaash ah, shabakadaha bulshada ee shaqsiyadeedna si dardar leh ayaa loo abuuri doonaa, warshadahana waxay ka faa iidaysan doonaan “dayactirka raadinta eber” (dayactirka eber, af ingiriisi). GIV waxay saadaalineysaa in 90% milkiilayaasha aaladda caqliga leh ay adeegsan doonaan kaaliyeyaal shaqsi caqli gal ah.
Nidaamyada garaadka ee caqliga leh ayaa isku xiri doona dadka, gaadiidka iyo kaabayaasha, abuurista ciriiriga eber, jawaab deg deg ah oo deg deg ah iyo howlo kale oo nolosha fududeyn doona. GIV waxay saadaalineysaa in 15% gawaarida ay lahaan doonaan tikniyoolajiyad gawaarida ku xiran wax walba oo shabakada mobilada ah (Gawaarida Mobilada-Wax walbana, af Ingiriis)
Ku shaqeynta botska
Horeba u beddelashada warshado badan, qalabaynta miyir-qabka ah waxay qaadan doontaa khataro badan, soo noqnoqday, iyo hawlo sarsare oo sare – faa iido u leh nabadgelyada iyo wax soo saarka. Hay’adda GIV waxay saadaalineysaa in 10,000 robots ay ku jiri doonaan warshadaha 10,000kii shaqaale kasta.
Hal abuurnimo kordhay
Sirdoonka farshaxanka ee Cloud Artificial waxay yareyn doontaa qiimaha iyo carqaladaha gelitaanka tijaabada sayniska, hal-abuurka iyo farshaxanka, furitaanka dahab dahab ah ee kartida hal abuurka leh ee qof walbaa heli karo. GIV waxay saadaalineysaa in 97% shirkadaha waaween ay geyn doonaan sirdoonka Artificial Intelligence.
Sirdoonka farshaxanka iyo falanqaynta xogta waaweyni waxay abuuri doontaa isgaarsiin kaamil ah oo udhaxeysa shirkadaha iyo macaamiisha, waxayna jebin doonaan carqalada dhanka luqadda ah. Saxnimada, fahamka iyo kalsoonida ayaa gacan ka geysan doonta isgaarsiinta berri. GIV wuxuu saadaaliyay in shirkaduhu isticmaali doonaan 86% xogta ay soo saaraan.
Shirkadaha adduunka oo dhan waxay ku dhawaynayaan teknolojiyadda dijitaalka ah iyo codsiyo caqli badan oo ku saabsan marin habaabin mideysan. Tan macnaheedu waa iskaashi weyn, wadaagis kheyraadka, hab-dhismeedka deegaanka oo xoog leh iyo waxsoosaar sareeya. GIV waxay saadaalineysaa in dhammaan meheradaha meelkasta ay isticmaali doonaan tikniyoolajiyadda daruuriga ah iyo 85% codsiyada ganacsiga ay noqon doonaan kuwo ku saleysan daruur.
5G Daawasho Degdeg ah
5G waa halkaan wuuna ka dhaqso badan yahay jiilkii hore ee bilaa-waayirka ah – suurtagalnimada shaqsiyaadka, ganacsatada iyo bulshada waa mid aad u weyn. GIV waxay saadaalineysaa in 58% dadka dunida ku nool ay heli doonaan 5G.
Maamulka Caalamiga ah ee Dijital ah
Horumarinta tikniyoolajiyada dhijitaalka ah waa in lagu dheelitiro heerarka xogta wadaagga ah iyo mabaadi’da xogta loo adeegsado. GIV wuxuu saadaalinayaa mugga sanadlaha ah ee xogta adduunka si loo gaaro 180 ZB (1 ZB = 1 tiriliyan GB).
“Isbeddelka tikniyoolajiyada ee degdegga ahi wuxuu noo oggolaanayaa inaan gaarno seenyooyinka aan ku fikirnay filimada khayaaliga sayniska. Waxaan ku hagaynaa himiladeenna wixii ka dambeeya waxaan hadda aragnaa oo mustaqbal u rajeyneynaa, kana dhaqaaqeynaa hal-abuurnimada una gudbineysa hal abuur. Wadamada qaarkood waxaan horey u aragnay isbedelo dhanka nolosha, shaqada iyo bulshada iyadoo warshadaha ay aqbali doonaan Sirdoonka Artificial, 5G, comput Cloud iyo teknolojiyadda kale ee soo ifbaxa. ”, falanqayn Julio Sgarbi, Madaxa lataliyaha Huawei Brazil. “Huawei waxay kaqeybqaadan doontaa wax soo saarkan iyadoo la kabayo 5G, Sirdoonka Artificial, Cloud iyo teknolojiyadda kale ee soo ifbaxaya, iyadoo la siinayo dadka oo dhan, guryaha iyo ururada mustaqbal wanaagsan, iyo sidoo kale faa iidooyinka fursadaha koritaanka cusub.”
HarmonyOS: Huawei waxay ku dhawaaqday Nidaamka Howlgalkeeda ee Muddo dheer la sugayey
Huawei Watch GT Ciyaaraha ciyaaraha firfircoon ee leh batari deeqsinimo ah ayaa soo gaadhay Brazil